4x6 Halo Mwenje Mwenje Kenworth T800 Yakatungamirwa Mwenje yeT800 Kenworth T800 Kutsiva Mahara Mahara Purojekita
Item Nha. MS-4686D-T800
4x6 halo mwenje yemwenje yeKenworth T400 T600 T800 W900B W900L, inouya ne55w 3500lm yakakwirira danda uye 30w 2800lm yakadzika danda, chena halo drl uye amber Turn masaini.
Iyo Kenworth T800 Led Headlights inouya ne6000K tembiricha yemavara inovhara kune zuva rezuva kuti riwedzere kujekesa kwekutarisa kwekutarisa uye kuwedzera kutyaira kwekutyaira. Well isapinda uye isina guruva kuita. Yakasimba imba kesi ine yakanaka yekuita kupisa singi. Yakakwira simba kuwanda uye mwenje kusimba kuti uwedzere mutsetse wekuona, wedzera yakachengeteka kutyaira mamiriro kwauri. Dzedu Dzakatungamirwa Mwenje dzeT800 Kenworth dzine Low kudyiwa, inoshanda, kuchengetedza simba uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza maitiro. Yakakwira simba pa / yekupindura nguva, Hupenyu hwehupenyu hwakareba kwemaawa anopfuura mazana mazana mashanu. Chivhariso uye kutamba, nyore kugadzwa, kazhinji mari iwe kumativi maminitsi gumi nemashanu yokugadza. Inokodzera Kenworth T50000 T15 T800 W400B W600L classic 900/900 HK classic.
Tsanangudzo yeKenworth T800 Led Headlights
mhando T800 T400 T600 W900B W900L classic 120/132 HK yakasarudzika
divi 4x6 inch yakatungamira mwenje
Halo Mhete Yakachena halo drl uye amber shandura chiratidzo
Zvimiro zveKenworth T800 Led Headlights
Makomborero e4x6 Halo Misoro
Ndine 1996 Freightliner Fld 120 iri kutsvaga kutenga seti yemwenje yakatungamirwa nemapango epamusoro uye kutamba isina wiring yakawedzera.